'संघीयतामा दोहोरो कर लाग्दैन' - Karobar National Economic Daily
'संघीयतामा दोहोरो कर लाग्दैन'
query_builderApril 11, 2017 8:27 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility436
उद्योग वाणिज्य महासं‌घको साधरणसभामा प्रधानमन्त्री । तस्बिर: पूर्णिमा श्रेष्ठ
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरे पनि त्यसबाट व्यवसायीमाथि अतिरिक्त करको भार नपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् ।
मुलुकभित्र वस्तु, सेवा र पुँजीको आवतजावतमा दोहोरो कर नलाग्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५१ औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन वस्तु, सेवा र पुँजीको आवतजावतमा दोहोरो कर नलाग्ने बताएका हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त हुन आग्रह गर्दै आन्तरिक बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि दोहारो कर लगाउन नहुने उनले बताएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीले बेहोर्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट कम गर्न पनि सरकार सचेत रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । संघीय प्रणालीमा सरकारका तहबीच दोहोरो कर नलाग्ने भन्दै उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र सर्वसाधारणको सुविधाका लागि उपलब्ध विद्युत्को कुशल व्यवस्थापन गर्दै लोडसेडिङलाई क्रमश घटाउँदै लगिएकाले औद्योगिक वातावरण बन्दै गएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिएको, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको बताए ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । उनले रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना र लगानीका लागि अवरोधका रूपमा रहेका प्रशासनिक अवरोध हटाउने लगायतका काम अगाडि बढाइएको छ ।
उत्पादन क्षेत्रले वस्तुको निर्यात विस्तारमा अपेक्षाकृत प्रभाव राख्न नसकेको उनको अनुभव छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, कृषि, वन र ऊर्जामा लगानी वृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलापमा मानवीय संशाधनको अधिकतम परिचालन गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने स्पष्ट पारे । २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छन् ।
सोमबारदेखि सुरु भएको महासंघको ५१ औ साधारणसभा मंगलबार सकिनेछ । मंगलबार संशोधित विधानले व्यवस्था गरेबमोजिम हालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन हुनेछ ।
कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले देशमा औद्योगिक वातावरण बनाइ स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धनमा जोड दिइनुपर्ने बताए । “जबसम्म स्वदेशी लगानीका उद्योगधन्दाहरू फस्टाउन सक्दैनन् तबसम्म विदेशी लगानी आउँदैन, यसका लागि औद्योगिक वातावरण बनाउनु जरुरी छ,” अध्यक्ष मुरारकाले भने, “औद्योगिक वातावरण बनाउने लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्नु जरुरी छ ।”
ऊर्जा विकास, श्रम सम्बन्ध, एकद्वार प्रणाली, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, निर्यात प्रवद्र्धन, व्याजदरमा सुनिश्चिता लगायतका विषयमा सुधार हुनुपर्ने उनले जोड दिए । आर्थिक मुद्दामा सबैको एकता भएमा देशमा विकासको गतिमा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले लगानीका लागि नेपाललाई स्वर्णभूमि भन्दै पर्याप्त बजार, सस्तो श्रम तथा अनुकुल वातावरण भएको बताइन् । उनले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले पूर्वाधार विकास गरे अरु काम निजी क्षेत्रले गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाइन् ।
गोल्ड अवार्डबाट १३ विभूषित
महासंघले स्वर्ण वर्षको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्दै १३ जनालाई ‘एफएनसीसीआई गोल्ड अवार्ड ‘टे«न्ड सेटर’ प्रदान गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा टे«न्ड सेटरका रूपमा रहेका व्यक्ति तथा संस्थाको मुल्यांकन गर्दै महासंघले सम्मान गरेको हो ।
अवार्ड पाउनेमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमसेर राणा (फाइनान्स), कर्ण शाक्य (पर्यटन), कैलाश सिरोहिया (सञ्चार), वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत (वायुसेवा), नकिम उद्दिन (मनोरञ्जन), रुद्रराज पाण्डे (सूचनाप्रविधि) रहेका छन् ।
क्षेत्रगत रूपमा उत्कृष्ट योगदान पु-याउनेलाई एफएनसीसीआई गोल्डेन अवार्डले समान्न गरिएको अवार्ड छनोट समितिका संयोजक रञ्जित आचार्यले बताए । यस्तै, सामाजिक क्षेत्रतर्फबाट अवार्ड पाउनेमा काठमाडौ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा (शिक्षा), तिलगंगा आँखा केन्द्रका चिकित्सक डा. सन्दुक रुइत (स्वास्थ्य), माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइराला (सामाजिक काम), नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ (सार्वजनिक प्रशासन) रहेका छन् ।
महासंघले उद्योग क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पु-याएको भन्दै विराटनगर जुटमिलका संस्थापक स्व. रामलाल गोल्छा र सेवामूलक व्यवसायबाट मनकामना केबलकारका संस्थापन स्व. लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठलाई मरणोपरान्त सम्मान गरेको छ । कारोबारका पूर्वसम्पादक सञ्जय न्यौपानेलाई पनि मरणोपरान्त यस वर्षको आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
महासंघको आगामी कार्यसमितिका लागि मंगलबार निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनले ६५ सदस्यिय कार्यसमिति चयन गर्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वतः अध्यक्ष हुनेछिन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हालका जिल्लानगर उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान र एसोसिएट उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा प्रतिस्पर्धामा छन् । एसोसिएट उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्विरोध भइसकेका छन् भने जिल्लानगर र वस्तुगत उपाध्यक्ष तथा सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ संघीय प्रणाली